ပင်မစာမျက်နှာ အာဖရိကဘောလုံးပြိုင်ပွဲ Ghanian ဘောလုံးကစားသမားများ မိုက်ကယ် Essien ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB အကောင်းဆုံးအမည်ဝှက်ခြင်းဖြင့်လူသိများသူတစ်ဦးချယ်လ်ဆီးဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများအများ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်; "ဒီ Bison"။ ကျွန်ုပ်တို့၏မိုက်ကယ် Essien ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ရက်စွဲကိုမရောက်မှီတိုင်အောင်သူ၏ကလေးဘဝအချိန်ကနေသင်တို့ဆီသို့ထူးဆန်းသောဖြစ်ရပ်များတစ်ဦးအပြည့်အဝအကောင့်တတ်၏။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကျော်ကြားမှု, မိသားစုဘဝနှင့်သူ့ကိုအကြောင်းကိုပယ်-စေးအများအပြားနည်းနည်း-လူသိများအချက်အလက်များရှေ့တော်၌မိမိဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိပါဝငျသညျ။
ဟုတ်ပါတယ်, လူတိုင်းမိမိအမြန်ဆန်အရည်အချင်းများအကြောင်းကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့သောငါတို့မိုက်ကယ် Essien ရဲ့ဇီဝစဉ်းစားပါ။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ်ခွင့်ပန်ပြီးမှမရှိဘဲရဲ့ Begin ကြကုန်အံ့။
မိုက်ကယ် Essien ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ဘ0အစပိုင်း
မိုက်ကယ် Kojo Essien ဒီဇင်ဘာလ3၏ 1982rd နေ့၌အက်ခရာတှငျမှေးဖှားခဲ့သညျ။ သူကသူ့မိခင်, Aba Gyandoh နှင့်ဖခင်ဂျိမ်း Essien မှမွေးဖွားခဲ့သည်။ Essien ဂါနာအတွက် Gomoa Nyanyano DC ကမူလတန်းနှင့် JSS တက်ရောက်ခဲ့သည်။ သူကသူ့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနေ့ရက်ကာလ၌ဤအနှိမ့်ချခြင်းနှင့်အသိဉာဏ်ကျောင်းကကလေးအဖြစ်ခဲ့သည်။
သူက Liberty ပညာရှင်များကိုခေါ်ဒေသခံတစ်ဦးကလပ်မှာကစားကိပ်ကမ်းခြေမှာရှိတဲ့စိန့်သြဂတ်စရဲ့ကောလိပ်မှဘွဲ့ရပြီးနောက်မိမိအဘောလုံးစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သူနယူးဇီလန်အတွက် 1999 ဖီဖာဦး-17 ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံရှစ်အတွက်ကစားသည့်အခါ Essien မှတဆင့်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဥရောပကင်းထောက်အသိပေးစာယူစတင်ခဲ့ပြီးနှင့် Essien ဧပြီလ 2000 အတွက်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာစမ်းသပ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူကဒါဘီကောင်တီမှကလပ်ရဲ့အောက်မှာ-17 အသင်းရဲ့ရှုံးနိမ့်အတွက်ကစားခဲ့ပါတယ်။
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကသူ့ကိုစာချုပ်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်သူကယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက်အလုပ်ပါမစ်ရရှိရန်အရည်အချင်းမပြည့်မှီခဲ့ပါတယ်။ သူသည်ထိုကွောငျ့, သူအင်္ဂလန်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အရည်အချင်းပြည့်မီခဲ့သည်အထိဘယ်လ်ဂျီယံလမ်းခွဲကလပ်တော်ဝင် Antwerp ပူးပေါင်းဆင်ခြင်၏။ သို့သော်သူ၏မိခင်အတောအတွင်းအစားပြင်သစ်တစ်ဦးပြောင်းရွှေ့ပိုမိုနှစ်သက်သည်။
ပြင်သစ်တွင်ငါးနှစ်ကြာစစ်မှုထမ်းပြီးနောက် Essien ပြင်သစ်နိုင်ငံသားရရှိခဲ့သည်။ သူဟာချယ်လ်ဆီးမှပြောင်းရွှေ့မချခင် 2000 သည်အထိ 2003 ထံမှ Bastia အဘို့ကစားနှင့် 2003 ထံမှ 2005 ဖို့လိုင်ယွန်။ ကြွင်းသောအရာ, သူတို့ပြောသကဲ့သို့ယခုသမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
မိုက်ကယ် Essien ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -relationship ဘဝ
အများအပြားမင်းသမီးချိန်းတွေ့နှင့်ဆက်ဆံရေးလေးနံရံများမျိုးစုံမြည်းစမ်းပြီးနောက်မိုက်ကယ် Essien ဂါနာလူမျိုးဇာစ်မြစ်တစ်ခုကဗြိတိန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးသူသည်မစ္စ Akosua သည်း Essien နှင့်အတူဆင်းအခြေချရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
သူမသည်တစ်ကြိမ် FC အသင်း Como လီမိတက်တို့ကကျင်းပမယ့်ဒေဝါလီခံလေလံတင်€ 237,000 တစ်ခုအီတလီကလပ်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ အဆိုပါကိန်းဂဏန်းကိုပိုမိုစတင်စျေးနှုန်းထက်€ 10,000 ဖြစ်ခဲ့သည်။ အောက်တွင်တစ်ဦးတောက်ပကြည့်အတွက်မိုက်ကယ် Essien နှင့်ဇနီး၏ဓာတ်ပုံဖြစ်ပါသည်။
မိုက်ကယ် Essien ကလေးများသူလမ်းသည်သူ၏လက်မထပ်မီသူတို့ကိုရှိခဲ့အဓိပ္ပာယ်အရွယ်ရောက်ဖြစ်ကြသည်။ သူဟာအရွယ်ရောက်သမီးအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံ Michelle Essien ဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်။
သူလည်းမိုက်ကယ် Essien Jnr အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံအမည်ရှိသောအရွယ်ရောက်သားရှိပါတယ်။
Akosua သည်း Essien နှင့်အတူဖြစ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုမီ, မိုက်ကယ် Essien အောက်ပါဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပါတယ်:
Dela Ackumney နဲ့ဆက်ဆံရေး၌ရှိ၏ မိုက်ကယ် Essien 2003 ထံမှ - 2006 ။
Takoradi အတွက် 21st နိုဝင်ဘာလ 1982 မှာမွေးဖွား Nadia Buari တစ်ဦးလူကြိုက်များဂါနာလူမျိုးမင်းသမီး, ဂါနာသည်ယခင်ကမှလက်ထပ်ခဲ့သည် မိုက်ကယ် Essien.
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံ Cassie Sumner 2006 နှင့် 2007 အကြားမိုက်ကယ် Essien နှင့်အတူဆက်ဆံရေး၌ရှိ၏။ သူမလည်းရက်စွဲပါထားပါတယ် Carlton ကိုးလ် (2007) နှင့် Celestine Babayaro (2004 - 2005) ။
Lurata Murati တစ်ချိန်ကအတူဆက်ဆံရေးအတွက်ခဲ့သူတစ်ဦးကဗြိတိန်မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ် မိုက်ကယ် Essien (2006) ။ Lurata မိုက်ကယ် Essien ရဲ့ထွကျော်ကြားသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံ Leila Beiruthy နဲ့ဆက်ဆံရေး၌ရှိ၏ မိုက်ကယ် Essien 2007 အကြား 2008 ရန်။
Leila သူတစ်ဦးမဟုတ်တော့အချိန်များအတွက်လူသိများခဲ့သော Akosua သည်း Essien နှင့်အတူနောက်ဆုံးတော့အခြေချဖို့သဘောတူမတိုင်မီရက်စွဲပါနောက်ဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ယောက်မိုက်ကယ် Essien ဖြစ်ခဲ့သည်။
မိုက်ကယ် Essien ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -မိသားစုဘဝ
မိုက်ကယ် Essien ဆင်းရဲသားမိသားစုနောက်ခံကနေကြီးပြင်းခဲ့သည်။
ဂျိမ်း Essien, သူ့ဇီဝဗေဒဖခင်တစ်ချိန်ကကြောင့်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းသူ့ကိုများအတွက်ဖြည့်တင်းဖို့မိုက်ကယ်ရဲ့ပျက်ကွက်မိမိသားနဲ့ဒေါသရှိခဲ့ပါတယ်။
အကျိုးဆက်အဘမိုက်ကယ်နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. သုံးပြီးငြိမ်းသင့်ကြောင်းဖော်ပြထားခဲ့ပါသည် '' Essien '' မိမိအအမည်သစ်ကိုရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
"ငါသည်ယခုတစ်နှစ်ကျော်အဘို့နေမကောင်းဖြစ်ရပြီ။ "ဒါဟာငါ့ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်သောသူ Kyeremeh (Berekum ချယ်လ်ဆီးဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ) ဖြစ်ပါသည်, ငါမိုက်ကယ်ငါ၏နာမကိုထမ်းဖို့ဆက်လက်မမှတ်ကြည့်ရှု သူကတခါဂါနာမင်္ဂလာအားကစားအပေါ်ကဆိုသည်။
ကစားသမားရဲ့စွပ်စွဲတာဝန်မဲ့လုပ်ရပ်များစေပြီစေခြင်းငှါ, အဘယ်အရာကိုမှတုံ့ပြန်ဂျိမ်းစ် Essien ပြောကြားခဲ့့သည်က ... , "သူ့မိခင်ကသူ့ကိုငါ့အ upkeep များအတွက်ထောက်ပံ့ရပ်တန့်ဖို့နေမကောင်း-အကြံပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသူသညျငါ၏နာမကိုအမှီသုံးပြီးရပ်ကြောင်းသေချာစေရန်အားလုံးမှထွက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ငါပညတ္တိကျမ်းတရားရုံးများသူ့ကိုဆွဲယူဖို့ရှိသည်ရင်တောင်ငါ ", ထိုပြုလိမ့်မည် သူကဆက်ပြောသည်။
မိုက်ကယ် Essien ယခုအချို့သောအချိန်များအတွက်မိမိအဘ၏စောင့်ရှောက်မှုယူပြီးသူ့ရဲ့တာဝန် shirked ရှိသည်ဟုစွပ်စွဲနေပါတယ်။ အောက်တွင်စိတ်တစ်ခုကျန်းမာရေးအန္တရာယ်ပေမယ့်ပျော်ရွှင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိဂျိမ်း Essien ၏ဓာတ်ပုံဖြစ်ပါသည်။
ဂျိမ်း Essien သည်သူ၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းများအဘို့ကိုမြှူဆွယ်တောင်းခံရန်မီဒီယာများသို့သွားရန်အသုံးပြုသည်။ ဤ 2008 မှ 2010 အကြားမိုက်ကယ်သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏အထွတ်အထိပ်မှာအခါအချိန်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ မိုက်ကယ် Essien ကိုယ်တော်တိုင်လည်းသူ့အဖေအားဖြင့်ဖန်ဆင်းတော်တောင်းဆိုမှုများ debunk ထွက်ချိန်ရောက်လေပြီ။ စွပ်စွဲချက်များနှင့်တစ်ချိန်ကဂါနာလူမျိုးလူဦးရေထဲကနေရောထွေးတုံ့ပြန်မှုကိုဆွဲဆောင်ဖခင်နှင့်သားနှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့်တန်ပြန်စွပ်စွဲချက်, နှစ်ဦးစလုံး။
အမှန်တရားဖော်ထုတ်နိုင်ရန်ကြိုးပမ်းမှာတော့လူတွေဂျိမ်း Essien အမှန်ပင်သူ့သားကသူ့ကိုလျစ်လျူရှုခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်ရှိရာအဖေရဲ့ရွာနေတဲ့ခရီးစဉ်ကိုခေါ်သွားတယ်။ အောက်ကပုံထဲကသူတို့ကိုမွငျလြှငျအဘယျသို့ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒီကြားနာပေါ်မှာချယ်လ်ဆီးကွင်းလယ်ကစားသမားကိုဖတ်သောကြေညာချက်, ဖြန့်ချိခြင်းဖြင့်မီးတောက်ရေဖြန်းငြိမ်းသတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း: '' ငါသည်ငါ၏အသက်တာ၌များသောခက်ခဲစိန်ခေါ်မှုများရင်ဆိုင်ခဲ့ကြပေမယ့်ဒီအကြှနျုပျစိတျနှလုံးမကြာသေးမီကငါ့ကိုယ်ပိုင်ဖခင်အားဖြင့် goaded အဆိုပါဂါနာလူမျိုးမီဒီယာ၏သေးငယ်တဲ့အပိုင်းများက peddled မိစ္ဆာထုတ်ပြန်ချက်များအပေါ် bleeds အဖြစ်အစဉ်အမြဲငါပြုမိပါပြီအခက်ခဲဆုံးအရာဖြစ်ပါတယ်။ ငါသည်သင်တို့ကိုစရိုက်ကိုပြုသည့်အခါ, သင်သာညျဘုရားသခငျ၏အသိအမှတ်ပြုမှုဘို့အသွားနေသောကြောင့်အများပြည်သူသို့မဟုတ်မည်သူမဆိုငါပြုမည်ဆိုကောင်းသော၌ငါ့မိသားစုဆှေးနှေးဖို့လိုခငျြဘူး။ လူတွေကသာမန်အားဖြင့်ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ဘို့ကဲ့ရဲ့မရကြဘူးဆိုတော့သူကငါ့အကွောငျးကို လုပ်. , မှားယွင်းသောညစ်နှင့်စော်ကားသောမှတ်ချက်များ၏ပြောပြသည်အခါငါသည်ငါ၏ဖခင်များအတွက်အဘယ်သို့ပြုသည်ကိုပေးထား, ငါသည်ငိုကြွေးကြ၏။
'' ဒါပေမယ့်ငါ့ခမည်းတော်ပြန်ထိုကဲ့သို့သောကြောက်မက်ဘွယ်သောလမ်းအတွက်ငါ့ကိုပေးဆောင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒီအတွက်ကြောင့်ငါ ကံမကောင်းသူငါ့မိသားစုအရှက်ကွဲစရာမှအစွန်းရောက်သွားပြီဖြစ်သောကြောင့်သူ့ကိုငါအဘို့အဘယ်သို့ပြုသည်ကိုပြောပါရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေကြပြီ။ ငါကအောက်ပါအချက်အလက်များဖော်ပြလိုပါလိမ့်မယ်:
1 ။ ငါ့အဘသည်လက်ရှိတွင်ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်ငွေနှင့်သူ့အဘို့တည်ဆောက်ဖို့ငါ့နှမညွှန်ကြားသုံးအိပ်ခန်းအိမ်သူအိမ်သား (မရွှံ့အိမ်သူအိမ်သား) တွင်နေထိုင်သည်။
2 ။ သူကမှန်မှန်သူ့ကိုပိုက်ဆံနဲ့ငါစေလွှတ်သည်အခြားအခြေခံလိုအပ်ချက်များပေးရသည်ငါ့အမိန့်အပေါ်ငါ့နှမဒိုင်ယာနာအားဖြင့်တစ်ပါတ်လစဉ်သွားရောက်ကြည့်ရှုပြီးပိုမကြာသေးမီကနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူကသိပ်ကဲ့ရဲ့တော်မူသောငါ့အမိ, အစကိုသူ့အဘို့ပေးပါသည်။
3 ။ ငါသူ့ကိုသူ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပိုမိုလွယ်ကူစေရန်အဘို့အကားတစ်စီးဝယ်နဲ့ကျွန်မသူ့ကိုပေးငွေတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုကားလောင်စာဒါမှမဟုတ်ဆင်းချိုးသည့်အခါကပြုပြင်ရာတွင်အသုံးပြုသည်။
4 ။ မိမိအနာမကျန်းထွက်ဖဲ့သောအခါငါသူ့ကို Asikuma ဆေးရုံသို့ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့တောင်းပေမယ့်သူကတိုင်းရင်းဆေးလိုလားဟုပြောသည်။
သူ့ကိုရိုးရာကုသမှုခံယူဖို့အတွက် 'ငါပိုက်ဆံပေး။ ဒါဟာဘာမျှမထံသို့ လာ. ဆေးရုံခေါ်သွားခံရဖို့အဘို့ငါအမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ကျွန်မရဲ့မိသားစုကျွန်မသူနာပြုအိမ်ပြန်လာနှင့်ပုံမှန်သူ့နောကျမကွညျ့ဖို့အတွက်လည်းစည်းရုံးခဲ့ကြသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ကြောင့်ဤအကြောင်းပြချက်နဲ့ကျွန်မလူသိရှင်ကြားဖော်ပြမည်မဟုတ်အများအပြားပိုပြီးအကြောင်းရင်း, ငါဟုသူကပြောသည်ရှိသည်ဟုစွပ်စွဲဘာကြောင့်တုန်လှုပ်နေပါတယ်သို့သော်လည်းဘုရားသခင်သည်ငါနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်တောင်ငါ့ကိုမြှင့်သို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူခဲ့ပါဘူးသူတစ်လူကိုလိုက်ကြည့်ဖို့ကျွန်မရဲ့အကောင်းဆုံးပွုပါပွီသိတယ် ငါ၏အကြီးပြင်းနှင့်သူကိုကူညီနိုင်သူ 8 အခြားကလေးများရှိပါတယ်။ ''
ဒီထိထိမိမိစကားများပြောနေပြီးနောက်, မြေတပြင်လုံးစွပ်စွဲချက်သဘာဝအသေခံသေဆုံးခဲ့ပါသည်။ ကြီးမားသောမှာဂါနာလူမျိုးများနှင့်ကမ္ဘာ၏စိတ်နှလုံးကိုငြိမ်းချမ်းရေးမှာနောက်တဖန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
မိုက်ကယ် Essien ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -နာမည်ပြောင်နောက်ကွယ်မှအကြောင်းရင်း '' အဲဒီ Bison ''
ကြောင့်မိမိအခက်ခဲ ယူ. စတိုင်နှင့်လက်နက်ဖြစ်၏စွမ်းအင်ငှါ, အစေးအပေါ် Essien ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှိနေခြင်းသူ့ကိုအမည်, '' အဆိုပါ Bison '' ရရှိထားပြီးပါပြီ။
ကွင်းတစ်လျှောက်လုံးကသူ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသူ့ကိုအတိတ်၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကျင်းပနိုင်ရန်ကွင်းလယ်လူအဖြစ် Edgar ဒါဝိဒ်နှင့် Claude Makelele ၏အကြိုက်နှင့်အတူသာသာထိုးထိုးနှိုင်းယှဉ်လျှင်မမြင်စဖူး။
မိုက်ကယ် Essien ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -မော်ရင်ဟို Bond
31 သြဂုတ်လ 2012 တွင်, Essien ချယ်လ်ဆီးမှာသူ့ယခင်မန်နေဂျာနှင့်အတူသူ့ကိုပြန်လည်ပေါင်းစည်း, Real Madrid အသင်းနှင့်အတူတစ်ရာသီကြာအငှားစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုး ဟိုဆေးမော်ရင်ဟို. Real Madrid အသင်းနဲ့သူ့ရဲ့မိတ်ဆက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမော်ရင်ဟိုချစ်ခင်အဖြစ် Essien ရည်ညွှန်း "သူ့သား" Essien သည်သူ၏အဖြစ်မော်ရင်ဟိုရည်ညွှန်းစဉ် "Daddy"။ နှင့်မက်ဒရစ်ကစားသမားအဖြစ် Essien ရဲ့နောက်ဆုံးဂိမ်း - - ထိုရာသီ၏နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ကာလအတွင်း Essien သူမော်ရင်ဟိုထံအပ်နှံထားတဲ့မက်ဒရစ်များအတွက်သူ၏ဒုတိယဂိုးကိုရရှိခဲ့သည်။
မိုက်ကယ် Essien ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ပြီးတာနဲ့ခြိမ်းခြောက်လိုင်ယွန်
သြဂုတ်လ 14, 2005, လိုင်ယွန်နှင့်ချယ်လ်ဆီးအသင်းအပေါ်ချယ်လ်ဆီးမှ Essien လွှဲပြောင်းရန်တစ်ဦး $ 26-သန်းသဘောတူညီချက်အပေါ်သဘောတူညီခဲ့အဖြစ်ကံကောင်းတာက, ဒီ, ရှောင်ရှားခဲ့သည်။ ဒါဟာအင်္ဂလိပ်ဘောလုံးသမိုင်းမှာအရှည်ဆုံး-running လွှဲပြောင်းစစ်ကိုင်းများထဲမှအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ Essien လန်ဒန်ကလပ်များအတွက်အရေးပါသောကစားသမားဖြစ်လာရန်သွားလေ၏။
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားစစ်ဆေးပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုက်ကယ် Essien ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိဖြစ်ရပ်မှန်ဖတ်နေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တွင် LifeBoggerကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်ဤဆောင်းပါး၌တရားကိုကြည့်ရှုတော်မမူကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုကြည့်ရှုပါလျှင်, သင့်မှတ်ချက်ကိုနေရာကျေးဇူးပြုပြီးသို့မဟုတ် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ!။
သောမတ်စ် Partey ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ကီဗင်-မင်းသား Boateng ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်